Habka Samayska Cuntada - Gpedia, Your Encyclopedia
Habka Samayska Cuntada (Qaamuuska Af-Soomaaliga 2012: Footoosintasis; Ingiriis: Photosynthesis)Dhirtu waa noolaha kali ah ee cuntadiisa diyaarsada ayagoo isticmaalaya nidaam loo yaqaano [[Habka Samayska Cuntada]].
Habkan cunto samayska dhirtu wuxuu dhacaa wakhtiga maalintii sababtoo ah iftiinka falaadhaha qoraxda waa lagama maarmaan. Sidoo kale, habkani waxaa lagu sameeyn karaa nidaam loo yaqaano greenhouse oo iftiin fiican siin kara geedka. Habka samayska cuntada dhirta waa deeqaha koowaad ee Ogsajiinta ku dara hawoda. Markasta oo geedku cunto sameeysto ogsajiin ayuu sii daayaa, taasi oo dadka iyo xayawaanka kale neefsadaan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Habka_Samayska_Cuntada&oldid=164408"